5 Best Christmas Markets In Germany | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Best Christmas Markets In Germany
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 01/01/2020)
Unogona kuzvitenda zvinenge kuti nguva yegore zvakare? Ndicho yakaisvonaka nguva yegore! Chaizvoizvo kupinda nomweya Best Christmas Markets muGermany! Kubva mukupera November kusvikira Christmas Eve, guta dzinoungana zvose pamusoro Germany vari vava kungotaura nezvekudzoka Christmas misika. Somumwe aitawo zvikuru tsika mu Deutschland (Germany muna German), maguta makuru nemisha maduku chetezvo vanopemberera veMubatanidzwa mwaka. Saka vanobata rinopisa mug of gluhwein uye gadzirira akarinda chestnuts roasting on moto rakavhurwa izvi asingagoni potsa mazororo inopisa makwapa.
1. MuFrankfurt Romerberg And St. Pauls Square Christmas Market
Zvanzi Best Christmas Markets muGermany zviroto akagadzirwa. Kupukunyuka kumhanya-mhanya kuti muFrankfurt mukati meguta Old Town, iyo ichichinja kuita Krisimasi dreamland panguva yeKrisimasi. Romerberg uye St. Pauls sikweya rinoumbwa hafu nematanda dzimba wakajeka. Vari vakazadzwa emapuranga zvirindo akafukidzwa zviedza, zvishongo, uye nemimbure. Iva nechokwadi kuti murege kurasikirwa yakakurumbira pealing of mabhero, mumwe Christmas Eve tsika umo chechi zvinorira Old Town kungorira kubva zvinoenderana yose muruwa kuti kunoshamisa konzati ruzivo.
A aidanana duku pane muFrankfurt, asi sezvo mashiripiti! Ichi musha muduku rakagumbatirwa mukati makomo muganhu Belgium. Monschau zvechokwadi anouya mupenyu paKrisimasi nguva pamwe Best Christmas Markets muGermany.
Taundi Christmas zvemaoresa kunge rikaratidzwa kuva akakurumbira kuitira kuti vanhu veko akavhurwa gore kumativi House Krisimasi. saka, kana haudi Christmas, zvino izvi zvisiri pokugara! A zuva rwendo kubva Cologne kana Düsseldorf, enda tarisa guta jekesa madekwana apo nibbling kwavo romunharaunda Monschauer Dutchen spongecake uye sipping mulled waini usati kudzokera kuguta. With cobblestone zvayo mumigwagwa, chando zvikamu hafu matanda dzimba, uye ichitenderera Rwizi hazvina kukwana rine runyararo.
3. Rothenburg Ob the Tauber Reiterlesmarkt
Zvechokwadi ichi ndeimwe Europe vakawanda yakanaka Ages maguta. Zvinonzi saka wakajeka inoratidza zvakawanda sezvinoita firimu yakatarwa. Izvi ndezvechokwadi kunyanya panguva Christmas nguva uye kunoratidzwa nemitambo vamwe Best Christmas Markets muGermany.
The siluetti resuwo uye kudzivirira shongwe rinopa Aura ane rungano. Pamunopinda kuburikidza rimwe remagedhi akare, uchava pakarepo kunzwa vakachengeteka mukati nguva vanokudzwa masvingo nzvimbo ino uchidanana. Rothenburg un'anga akunda mumakore 1,000 makore uye ari kuramba kukanda nezvitsinga ayo padenga dzakawanda vashanyi.
Kubvira muzana remakore rechi15, inoshamisa Christmas musika kwagara kuchiitwa mutambo Christmas mwaka. musika Izvi zvinogona kutarira shure pamusoro 500 tsika gore, uye kubva panguva ino yava nokuchenjera achinja zvishomanene kwayo munhoroondo mavambo. nemagariro zviitiko zvakawanda inoitwa pachiimbwa pamusika uyu. The womumhuri pamusika, zvisinei, ndiye pakuonekwa rothenburg Riders, uyo akapawo musika uyu zita rayo. Nhoroondo kwakabva vatasvi anouya kwatiri kubva madzerere uye kure kare. Madzibaba edu vaidavira kuti vaiva nhume kubva imwe nyika, uyo aiyangarara kuburikidza matenga pamwe mweya vakafa yechando. Asi mufananidzo uyu ngano hunhu hwachinja pamusoro emakore. Nepo imwe inoshandiswa kubvunda nokutya pamberi ichi eerie mufananidzo, nhasi, nevaduku kutarisira adzoka. Chikara Mutasvi webhiza yazova mutumwa ane ushamwari.
Mambo Munich Christmas Markets uye mumwe Best Christmas Markets muGermany. Christkindlmarkt Izvi zvinogona kuwanikwa Marienplatz, Munich chikuru sikweya, pamwe inofadza nematanga vachiteura kunze pedyo kunotenga migwagwa naizvo.
Nokuda kwayo nechepakati nzvimbo muMunich Old Town, izvi nokure kupfuura touristy uye ungana musika, asi zviri nevakawanda kuti chikonzero: kungomira pakati pokushanda kwayo pashure mudanga tsika dzakaitwa nemaoko ounyanzvi, dzinofadza nezvikafu zvishoma kuti kutengwa uye zvose zvakare kudanana colour of opret Rathaus. Iva nechokwadi kuti Dhadha kupinda muchivanze Rathaus kuona zvidyiro zvamabhiza uye Christkindl posvo, apo unogona kuwana chinokosha Christkindl chitambi nokuda postcards yenyu / tsamba.
PS: Kuti tiwane nemamwe mashiripiti maonero, kuva nechokwadi kuti kwakuka St Peters Church Tower ranyura zvakare!
5. The muNuremberg Christkindlesmarkt
The muNuremberg Christkindlesmarkt, kana muNuremberg Christmas Market, ndiyo arguably Germanys dzakakurumbira Christmas musika. The Christmas musika musi Nurembergs Main Market Square kunogona kurondwa kudzokera magwaro kutanga kutaura nayo mugore 1628, asi Nurembergers kuzvitenda yakatanga kunyange mberi.
Kuita tsika kunokosha, uye voruzhinji nematanga kutengesa zvavo nhumbi tengesa zvinhu zvose akaita muAfrica nemhiri kwemakungwa. Kunyange yematanda nematanga pachavo vari akagadzirwa muAfrica nemhiri kwemakungwa sourced spruce!
Uchawana 180 emapuranga zvirindo kutengesa zvose kubva chinyakare Prune Men kuti vashongedze Nurembergers dzimba panguva yeKrisimasi kune Original Nuremberger kuti chete inogona ainzi sezvo vakadaro kana vari anogadzirwa mumamiriro guta nokuyera kunyatsotaura 23 magiramu.
Ready kunzwa mashiripiti Krisimasi kushanyirazve Best Christmas Markets muGermany? Zvadaro musoro pamusoro kuti Save A Train uye bhuku tikiti mumaminitsi!
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Best Christmas Markets In Germany” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-christmas-markets-germany%2F – (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)